Amakhosikazi anikezwe ithuba lokuhweba | News24
LAST UPDATED: 2018-09-20, 22:04
Amakhosikazi anikezwe ithuba lokuhweba
PHOTO: precious gumede Wonder cooker
AMAKHOSIKAZI asoGwini lulonkana anikezwe ithuba lokuthi aziqalele amabhizinisi komasipala awo. NgoLwesine umeya wasoGwini ehambisana nozakwabo omeya bakomasipala uVulamehlo, uMdoni, Umzwabantu, iHibiscus, Umzube kanye neZinqoleni banikezele abasefazane amastarter pack izindwangu imishini yokuthi bakwazi ukuqala umsebenzi wokwakha amaWonder Cooker okuyizikhwama zokupheka ukudla ngaphandle kukagesi.
Umeya uNtombifikile Gumede wasoGwini uthe umasipala woGu ongowokuqala ukuthi usukumele loluhlelo.
“Lohlelo lwasungulwa ihhovisi likaNdunankulu kanye nomyango wokuthuthukiswa kwezomnotho uEconomic development. UNkosikazi kaNdunakulu uThembeka Mchunu wabona kumbono omuhle ukuthi kube khona omama abazohlomula kulohlelo kakhulukazi komasipala abenezindawo zasemakhaya lapho amathuba omsebenzi ayimvela kancane,” kusho uGumede
Uthe Ugu lukhombise ukuzimisela okukhulu ngalomsebenzi.
“Thina njengoGu sabokuqala ukuthi siluqhube loluhlelo,” kusho umeya.
Uthe inhloso ukuthi abasefazane bazakhele amathuba omsebenzi bakwazi nokuthi bafundise nabanye abahlezi emakhaya uma amabhizinisi esekhula kanti futhi njengoba sekunezinkinga zikagesi amawonder cooker azokwenza izimpilo zabesifazane zibelula baze ukuthi noma ugesi ungekho isithambu siyavuthwa ekhaya.
Umasipala ngamunye unikwe imishini emithathu kanye nezindwangu ukuze umsebenzi uqhubeke ngokushesha.
UGumede uyaleze kakhulu kubaphathi bomasipala ukuthi bawulandelele lomsebenzi futhi baqinisekise ukuthi imishini nezindwangu szisala komasipala.
Ubuye wathi kumasipala waseMzube benza umsebenzi omuhle kakhulu bakhombisa ukuzimisela okukhulu.
“Iqembu lokuqala elaqeqeshwa emzumbe lathatha wonke amaWonder Cooker elawenza kuqeqeshwa lawadayisa lazitholele imali elinganiselwa ku R3000 lathenga eminye imishini,” kusho uGumede
Uthe lohlelo lungangenisa isinkwa ekhaya impilo yakho yone nasesizukulwaneni sakho, etshela omama.
Bakhombise okukhulu ukubonga omama ngalohlelo bathi bazozimisela ukuzenabo bagcine sebenamafemu abo akiqiza lezikhwama ezipheka ukudla isifundazwe sonke
Judgment reserved in political parties' case against Zuma's application to appeal costs order for state capture report review
5 Boks boost WP's stocks for Griquas clash